Pr Ratsimbazafy Jonah: « Aza atao maikamaika ny fambolen-kazo afafy » | NewsMada
Pr Ratsimbazafy Jonah: « Aza atao maikamaika ny fambolen-kazo afafy »
Par Taratra sur 15/10/2019
Mila fandalinana tsara ny fampiasana ny teknolojia vaovao, toy ny fampiasana “drone” entina hamboly hazo ana habakabaka. Tsy azo antoka koa ny vokatra satria tsy ampy ny tsiro hamelona ny voankazo. Fanehoan-kevitry ny Pr Ratsimbazafy Jonah.
Nisy atrikasa natao teto Antananarivo, ny faramparan’ny volana septambra teo, mikasika ny siansa, ny teknolojia ary ny fikarohana. Anisan’ny nandray anjara tamin’izany ny profesora Ratsimbazafy Jonah, filohan’ny Vondron’ny fanadihadiana sy ny fikarohana momba ny varika (Gerp) sady mitantana fikambanana miaro ny tontolo iainana rahateo. Ankasitrahiny ny politikam-panjakana amin’ny fampiasana teknolojia vaovao, toy ny “drone”, hamafazana voa ana habakabaka hambolena hazo. Manangona ny voa manerana ny faritra ny fanjakana ka milanja 500 kilao ny anjaran’ny faritra Alaotra Mangoro. Efa nifantina voankazo an’ala zanatany tena tsara ny Gerp, milanja eo amin’ny 100 kilao eo ho eo. Ao anatin’izany ny voandelaka, ny kininina, sns. Misy amin’ireo fikambanana na rafitra hafa anefa nanome voany manta na tsy matoy, izay azo antoka fa tsy haniry mihitsy. Koa na hampiasana “drone” aza, tsy ho vanona mihitsy izy ireny. “Lasa maimaika te hanenjika tarehimarika fotsiny ka tsy hahomby avy eo”, hoy ihany izy.
Aminy, efa tsy eo intsony ny tsiron’ny tany tsara, vokatry ny doro tanety nisesy. Dikany, mila harenina aloha ny nofon-tany satria efa bozaka mafy tsy mitondra na inona na inona ny maniry eo amin’ny tanety. Mila fikarakarana mialoha ny zana-kazo, ampiasana fakofako sy emboka. Eto anefa, ny voany ihany no afafy mivantana, koa kely ny antoka fa haniry satria tsy ampy ny tsiron’ny tany tokony haniriany.
Hanome asa eny ifotony
Nomarihiny fa ny 85%-n’ny zana-kazo hambolena mahazatra ireny no velona, raha tsara karakara. Soloina ireo maty, nefa vitsy ny manao toy izany, mandritra ireny fambolen-kazo fahita ireny. Mila hatao maromaro koa ny karazan-kazo hambolena fa tsy tokony ho iray toy ny fanao hatramin’izay. Fantarina tsara koa ny karazany sahaza ny toerana hambolena, tsy akambana ny karazany zanatany sy vahiny. Ohatra, tsy hiaraka haniry mihitsy ny voandelaka (tsy zanatany) sy ny hazo ala varongy, ohatra.
Ho an’ny profesora Ratsimbazafy Jonah, hanome asa ny fokonolona, hampandray andraikitra, ary hanehoana ny maha olom-pirenena ny fambolen-kazo ataon’ny olombelona. Azo averina ny nataon’ny miaramila misatroka maitso, namboly tany aloha. Tokony homena alalana hitazona fitaovam-piadiana ny mpiambina ny faritra arovana satria mitam-piadiana koa ireo mpihaza sy mpanimba ny harena voajanahary, toy ny any Afrika.